I-iPad entsha ka-2019 kunye noThotho lweeNkqubo zoMboniso we-5 Iindaba zeGajethi
Ukongeza kwi-iPhone 11, yiyo yonke into athe iApple yazisa ngentetho yokugqibela
UIgnacio Sala | | SmartWatch, amacwecwe
Kwimizuzu embalwa edlulileyo intetho ephambili yokwazisa nge-iPhone 11 entsha iphelile, umsitho njengesiqhelo ijolise kweyona mveliso ibalulekileyo ka-Apple, i-iPhone, Kodwa ayisiyiyo kuphela, kuba ikwabonisa ukuvuselelwa kwe-iPad 2018 kunye neApple Watch Series 5.
Iqabane lam uMiguel, likubonise Zonke iindaba ezivela kuhlelo lwe-iPhone olulishumi elinanyenge Igama lokuchonga elinde kakhulu ukuba ungalibiza, ngakumbi ukuba sithetha ngemodeli ngobukhulu besikrini, i-iPhone 11 Pro Max. Ukuba ufuna ukwazi zonke ezinye iindaba ezivezwe ngu-Apple, ndiyakumema ukuba uqhubeke nokufunda.
1.1 Amaxabiso e-ipad 2019, imibala kunye nokufumaneka
2 Uluhlu lwe-Apple Watch 5
2.1 Ukufumaneka kwamaxabiso kunye nemibala yeApple Watch Series 5
Nangona iApple ingalifakanga igama lokugqibela kwesi sixhobo, ukuba sifuna ukwahlula kwiimodeli zangaphambili, Kuya kufuneka songeze i-tagline 2019. Oku kungena kwi-iPad entsha, kusinika njengeyona nto iphambili kwiscreen se-10,2-intshi, ngale ndlela iApple ekugqibeleni ilibale i-iPad ye-9,7-intshi ebikhapha ukusukela oko kwasungulwa imodeli yokuqala ye-iPad.
Njenge-iPad 2018, i-iPad 2019 Iyahambelana nepensile ye-Apple, isizukulwana sokuqala kuphela. Ukungabikho kokwazi imigaqo ngokwememori ye-RAM, iApple ikhethe iprosesa ye-A10 Fusion, i iprosesa efanayo esinokuyifumana kwi-iPad 2018.
Eminye inkcazo yale 10,2-intshi ye-iPad, ziyefana ngokufanayo esinokuyifumana kwisizukulwana esidlulileyo, ke ukuba ubucele ukuvuselela i-iPad yakho 2018 ayisiyongcamango ilungileyo, ngaphandle kokuba ufuna ukufumana i-intshi ezi-0,5 ngaphezulu kwescreen.
Kwakhona, Nge-iOS 13, i-iPad inyuka amanyathelo aliqela ngokubhekisele ekusebenzeni esikunikwe yi-iPad ene-iOS 12 ukuza kuthi ga ngoku, ke ivula uluhlu olungenasiphelo lwamathuba. Phakathi kwezinto ezintsha esinikwa zona yi-iOS 13, ithuba lokudibanisa ii-hard drive zangaphandle kunye nezikhonkwane ze-USB kwisixhobo ukufikelela nokulawula ulwazi, qhagamshela ulawulo lwe-PlayStation 4 okanye i-Xbox ukonwabela imidlalo oyithandayo (enkosi kwi-Apple Arcade), kunye nemultitasking entsha, enika izijekulo ezintsha kunye nemisebenzi eyenza i-iPad ibe yindawo enokubekwa endaweni yelaptop njengoko siyiqonda.
Amaxabiso e-ipad 2019, imibala kunye nokufumaneka
I-iPad 2019 iyafumaneka ngemibala emithathu: indawo engwevu, isilivere negolide. Ngokuphathelele kwindawo yokugcina, sifumana iinguqulelo ezimbini: i-32 GB ye-379 euro kunye ne-128 GB ye-479 euro. Ukuba sifuna inguqulelo ngokudityaniswa kwe-LTE, ixabiso lemodeli engama-32 GB ngama-519 euros kunye ne-128 GB enye inyukela kwi-619 ye-euro.
Uluhlu lwe-Apple Watch 5
Emva kokwaziswa kwe-ECG kunyaka ophelileyo ngeApple Watch Series 4, I-Apple yayinegumbi elincinci lokuphucula kwesi sizukulwana sitsha seApple Bukela. Nangona kunjalo, ibuyile ukusothusa ngesi sixhobo ngenxa entsha ihlala ikwi-retina bonisa, Iscreen esisoloko sisibonisa ibala kunye nazo zonke iingxaki esizilungisileyo.
Xa sijika isihlahla sethu ukubona izaziso okanye ukujonga ixesha, isikrini sikhanyisa ngokwaneleyo ukuze kungabikho nzima ukufikelela kulwazi olusibonisayo. Ngokuka-Apple, Ubomi bebhetri buhlala bunjalo kunakwisizukulwana esidlulileyo, ke asizukuhlupheka ngumahluko omkhulu ngokubhekisele kwinkululeko esizibonela yona.
La ikhampasi eyakhelweyo yenye yeenoveli ezinikezelwa sesi sizukulwana sesihlanu seApple Watch, ikhampasi ekwabandakanya isalathiso sokuphakama ukuze sihlale sifumana indlela ebuyela naphina apho sikhona.
Enye into entsha etsala ingqalelo yesi sizukulwana sesihlanu ifumaneka kwizixhobo zokuvelisa. I-Apple Watch Series 5 iyafumaneka kwi i-aluminium, i-stainless steel, titanium kunye ne-ceramic. Isandla newatchOS 6, le Apple, njengemodeli zangaphambili ezihambelana nale nguqulo intsha yenkqubo yokusebenza yeApple Watch, sinayo imitha ye-decibel eya kuthi isazise xa isandi kwindalo esingqongileyo singabeka ubomi bethu umngcipheko.impilo yokuva.
Ukufumaneka kwamaxabiso kunye nemibala yeApple Watch Series 5
Esi sizukulwana sesihlanu iApple Watch igcina amaxabiso afanayo nasesizukulwaneni esidlulileyo, ukuqala nge-449 euros yemodeli ye-40-millimeter enecala le-aluminium kunye nokufikelela kwi-1.449 yemodeli enecala le-ceramic kunye ne-44 yeemilimitha.
I-Apple Watch enecala le-aluminium kunye ne-4 millimeter yecala: 449 euro
I-Apple Watch enecala le-aluminium kunye ne-44-millimeter ecaleni: i-479 euro
I-Apple Watch enetyala lensimbi kunye ne-4 millimeter yecala: i-euro ezingama-749
I-Apple Watch enecala lensimbi kunye ne-44-millimeter yecala: i-euro ezingama-779
I-Apple Watch enetyala le-titanium kunye ne-4 millimeter yecala: i-euro ezingama-849
I-Apple Watch enetyala le-titanium kunye ne-44-millimeter yecala: i-899 euros
I-Apple Watch enecala le-ceramic kunye ne-40-millimeter case: 1.399 euro
I-Apple Watch enecala le-ceramic kunye ne-44-millimeter case: 1.449 euro
I-Apple iqinisekisile ngokusemthethweni amaxabiso kunye nomhla wokukhutshwa ngokusemthethweni Apple Arcade. Umhla uya kuba NgoSeptemba 19 kwaye uya kumaxabiso nge-4,99 euro ngenyanga. Ukusukela oko yasungulwa, siya kuba nayo ngaphezulu kwe-100 imidlalo, imidlalo esinokuyikhuphela kwisixhobo sethu kwaye siya kuba nakho ukudlala ngaphandle kokunxibelelana ngokusisigxina kwi-intanethi.
Le nkonzo intsha Iyahambelana ne-iPad, i-iPad, iPod touch, iMac kunye neApple TV, ke siya kuba nakho ukudlala imidlalo yethu esiyithandayo nakwesiphi na isixhobo. Yonke imidlalo iyafumaneka kweli qonga abanakho ukuthenga okongeziweyo kwaye ababonisi iintengiso. Ukongeza, eli qonga liyahambelana Kusapho, ke ngobhaliso olunye kuphela, onke amalungu osapho aya kuba nakho ukonwabela wonke umxholo okhoyo.
Njengoko bekucwangcisiwe, iApple ikwabhengeze umhla wokuqaliswa kwenkonzo yayo yevidiyo, inkonzo ebizwa ngokuba yiApple TV +, inkonzo leyo iya kukhutshwa ngo-Novemba 1 kwaye iya kumaxabiso nge-4,99 euro ngenyanga. Eli xabiso libandakanya ukufikelela kuwo onke amalungu osapho kwaye lixesha leentsuku ezingama-7 zesilingo sasimahla.
Ukuba ucinga ukuvuselela i-iPhone yakho yakudala, i-iPad, iPod touch iMac okanye iApple TV, I-Apple ikunika unyaka omnye wenkonzo ye-Apple TV +. Ukonwabela umxholo esiza kusinikwa yile vidiyo intsha yokusasaza, akuyomfuneko ukuba uhambe ngeringi ka-Apple, kuba isicelo sokufikelela kumxholo siya kufumaneka, ukusuka ekwindla, kwiiTV ezikrelekrele kunye nakubadlali bevidiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » amacwecwe » Ukongeza kwi-iPhone 11, yiyo yonke into athe iApple yazisa ngentetho yokugqibela
I-GXT 540C yula camo edition nguTrust Gaming: Eyona nto iphambili kwimidlalo yemidlalo kwintengiso
I-Apple isungula i-iPhone 11 kunye ne-iPhone 11 Pro: Ixabiso, amaDethi kunye neeMpawu